thangno | THANGNO
Author Archives: thangno
ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်သွားဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ
အလုပ်များလွန်းသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်တက်လေ့ရှိပါသလား။ လူအများစုက ဘုရား ကျောင်းမှာ ပုံမှန်ဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သူတို့ပေးတာထက် သူတို့ပြန်ရတာ ပိုများတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် သွားရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒါဆိုမိတ်ဆွေ သင်ဘုရား ကျောင်း သွားဖို့ စိတ်မပါဘူးလား၊ သွားဖို့သင့်ကိုဘာလှုံ့ဆော်မှုမှမရှိဘူးလား။ ဘာကြောင့် သင်ဘုရားကျောင်း ကို သွားရောက် ၀တ်ပြုသင့်တယ်ဆိုတာ အောက်ပါ အချက် (၁၀)ချက် အားဖြင့် သင့်ကို ဘိတ်ခေါ်ပါရစေ။
၁။ အသက်ရှင်သော ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်
ခရစ်တော်ဟာ သင့်အတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သင်သိခဲ့ရင်၊ ထိုအချက်က သင့်ကို ဘုရားကျောင်းသွားဖို့ လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများ စုဝေး၀တ်ပြုတဲ့နေရာမှာ ထိုသခင်လည်း ထိုသူများနဲ့ အတူရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်တော်ဟာ ယုံကြည်သူများနဲ့ အတူရှိတယ်ဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့အချက်ဖြစ်သလို ထိုသခင်ဟာ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကြားနာတဲ့သူများရဲ့ အလယ်မှာ အမှန်တကယ် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မသဲ ၁၈း၂၀မှာ လူနှစ်ဦးသုံးဦး စုရုံးတဲ့အလယ်မှာ ငါရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်း ယုံကြည်သူများ အတူတကွစုရုံးခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်နဲ့ တစ်သားတကိုယ်တည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ ခရစ်တော် ဘယ်မှာ ရှိသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဟာ သင်တို့ ယုံကြည်သူများရဲ့ အလယ်မှာရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သခင်ခရစ်တော်ဟာ နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတဲ့ ယုံကြည်သူများ စုဝေးရာအလယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ လုကာ (၁၀း၁၆)မှာ သင်တို့၏စကားကို နားထောင်သောသူသည် ငါ့စကားကို နားထောင်၏။ သင်တို့ကိုပယ်သောသူသည် ငါ့ကိုပယ်၏။ ငါ့ကိုပယ်သောသူသည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော် မူသောသူကို ပယ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောသူအားဖြင့် ကြားသလို ထိုဟောပြောတဲ့သူကိုလည်း ခရစ်တော်က သူအားဖြင့် စကားပြောစေတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ခရစ်တော်၏ ညစာစားပွဲ (The Lord’s supper)သို့ ပါဝင်ကြသူများဟာလည်း ထိုသခင်ရဲ့ ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့ခြင်းကို သတိရဖို့ရန် အသွေးနဲ့အသားကို မိတ်သဟာယပြု စားသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုသခင်နဲ့ တစ်သားတစ်ကိုတည်းဖြစ်ခြင်းကို ပြတဲ့အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုခရစ်ရဲ့ညစာစားပွဲကို ၀င်ရောက်ကြ သူများကို လည်း ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ် (Communion) အဖြစ် သတ်မှတ်တာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁ကော ၁၀း၁၆-၁၇ တွင်လည်း ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ငါတို့သည် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းရာ မင်္ဂလာခွက်ဖလားမူကား၊ ခရစ်တော်၏ အသွေးကို ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ ငါတို့ဖဲ့သော မုန့်မူကား၊ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ကို ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ မုန့်တလုံးတည်း ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် တလုံးတည်းဖြစ်သော ထိုမုန့်ကို ဆက်ဆံလျက် ခံယူကြသောကြောင့်၊ အများဖြစ်သော ငါတို့သည် တလုံးတကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်တော်နဲ့ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ဖို့ရန် ကိုယ်တော်နဲ့ အတူ ညစာစားပွဲ (The Lord’s supper) သို့ ၀င်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဘာကြောင့် ဗိမာန်တော်သို့ လာပါသလဲ။ ခရစ်တော် အဲ့ဒီမှာရှိလို့ဆိုတဲ့ အဖြေကို ပေးရမှာပါပဲ။ အဲဒီနေရာမှာ အပြစ်ကိုနောင်တရသူ ယုံကြည်သူများအတွက် အပြစ်လွှတ် ဖို့ရန် ထိုသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ခရစ်တော် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီးသေခြင်းကို အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ ဗိမာန်တော်မှာ ၀တ်ပြုရခြင်းရဲ့ အဓိက အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ထိုသခင်ကြွလာရခြင်းဟာ လူများဆီကရယူဖို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကို ပေးဆပ်ရန်အတွက် ကြွလာရခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ မိတ်ဆွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ဖို့ရန် ထိုသခင်ကြွလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းကောင်းကို ဝေငှခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း အသက်တာ နဲ့ ကိုယ်တော်နဲ့တစ်လုံးတစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ထိုသခင်ရဲ့ လူသားများ အပေါ် တန်ဖိုးရှိသောပေးဆပ်ခြင်းကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပါတ်တာ လုံး လောက ထဲမှာ ပင်ပန်းနွမ်း နယ်ပြီး၊ အပြစ်နဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နောက် ဗိမာန်တော်ကိုလာရောက်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံမှ အပြစ်လွှတ်ခြင်း အခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လောကထဲမှာ နေထိုင်စဉ် အသံပေါင်းစုံ၊ ရွေးချယ်စရာပေါင်းစုံနဲ့ သင်အသက်ရှင် နေထိုင်နေရတာကို သတိပြုမိပါသလား။ လူဘ၀ဆိုတာရှုပ်ထွေးမှုပေါင်းစုံ၊ အမှားအမှန် စသဖြင့်ရောထွေးလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သင်ဗိမာန်တော်သို့ သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ အသံတော်ကို ဟောကြားသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၎င်း၊ ကျမ်းစာတော်မြတ်အားဖြင့်၎င်း၊ ဂုဏ်တော်ကျူးဧခြင်းအားဖြင့်၎င်း သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်က လူပရိသတ်အားလုံးကို စကားပြောသလိုတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုလည်း စကားပြောပါတယ်။ အမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသလို၊ ဘယ်အရာက မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြပေးပါတယ်။ ထိုသခင်ရဲ့အသံတော်အားဖြင့်နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ ခွန်အားနှင့်ပြည့်ခြင်း၊ အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းစတဲ့ ထူးခြားတဲ့အရာများကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသခင်ရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းအသံတော်အားဖြင့်မသန့်ရှင်းခြင်းများကိုပျောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသခင်ရဲ့အသံတော်မှာသမာတရားနဲ့ပြည့်ဝတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ယုံကြည်သူများဟာ ကိုယ်တော်ထံမှ လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းခဲ့ကြပေးမဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှန်တကယ်လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းကိုတော့ ဘယ်တော့မှလိုက်မနာကြဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာဆင်ခြေပေးစရာအချက်ရှိပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းသွားဖို့မလိုပါဘူး၊ အိမ်မှာကျမ်းစာဖတ်နေရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ လေ့လာခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကြားနားဖို့ အစားထိုးလုပ်ဆောင်ချက်တော့မဟုတ်ရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ သင်းအုပ်ဆရာဆိုတာက ဘုရားသခင် ခန့်ထားသောသူဖြစ်ပြီး ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကို ဟောပြောသူဖြစ်ပါတယ်။ (လုကာ ၁၀း၁၆၊ ဧဖက် ၄း၁၁-၁၆၊ ၁ တိ ၄း၁၃-၁၆၊ ၂တိ ၄း၁-၅၊ ဟေဗြဲ ၁၃း၁၇)မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ဘုရားကသင့်ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် သင်းအုပ်ဆရာဆိုသူများဟာလည်း ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို အချိန်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာသင်ယူထားသူဖြစ်ပြီး ဘုရားပေးသော ဆုကျေးဇူးကို ခံထားရတဲ့ သူဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက ကျွန်တော်တို့ လူသားများဟာ လူ့အတိုင်းအတာအားဖြင့် နေရာတိုင်းမှာ အထူးသဖြင့် မိမိလေ့လာထား တဲ့ ဗဟုသုတပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်သူများလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ပါတ်သက်လို့တော့ ကျွမ်းကျင်စွာသိဖို့မလိုပါဘူးလို့ ထင်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆေးကုသဖို့ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ကျွမ်းကျင်စွာ စာရင်းကိုင်နိုင်ဖို့ စီပီအေလိုဘွဲ့မျိုး လိုတယ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်တတ်ဖို့စက်ပြင်တဲ့ သင်တန်းအောင်လက်မှတ်ရဖို့လိုတယ် စသဖြင့်အတိုင်းအတာနဲ့သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျမ်းစာတော်မြတ်နဲ့ပါတ်သက်လာရင်တော့သိသယောင်ယောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုအမြဲဖတ်ရှုနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဟောပြောသွန်သင်ချက်တွေကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာများဘက်ကပြောဆိုနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်အတွေးနဲ့တွေးနေမှာစိုးလို့သတိပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ၀ိညာဉ်ကအဟာရပြည့်ဖို့လိုသလား၊ ကျမ်းစာအရလိုအပ်ပါတယ်လို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားဟောရာကျမ်း ၈း၃ နဲ့ မသဲ ၄း၎၊ ၁ပေ ၂း၂ ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်လူဟာမုန့်အားဖြင့်သာအသက်မွေးရသည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူချက်အားဖြင့်သာ အသက်မွေးရမယ် ဆိုတာကိုဖော်ပြထား တာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဟာ သင့်ဝိညာဉ်အတွက် အစာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများ စုဝေးသောဝတ်ပြုခြင်းဟာ သင့်ဝိညာဉ်အတွက် အကောင်းဆုံးအစာကျွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ယောဟန် ၆း၂၇)မှာယေရှုက မုန့်ကိုစား၍ ဝသောကြောင့်သာ ရှာကြ၏။ ပျက်စီးတတ်သောအစာကို ရခြင်းငှာမကြိုးစားကြနှင့်။ လူသားသည် သင်တို့အားပေး၍ ထာဝရအသက်နှင့်အမျှတည်တတ်သော အစာကိုရခြင်းငှါ ကြိုးစားကြလော့။ ထိုသားသည် ခမည်းတော် ဘုရား၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံသောသူဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဒါကြောင့် လူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်ကာယအတွက်ဘဲ အစာကို သဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေနေကြပြီး ကိုယ့်ဝိညာဉ်အတွက် တော့ အစာကျွေးဖို့မေ့ထားကြတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။
၆။ ချစ်တတ်ရန်၊ အားပေးတတ်ရန်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခက်အခဲနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပျက်ခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ စိတ်ပျက်စရာတွေ၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ အမြဲလုံးထွေးနေတတ်ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုပြောသလို လူသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမနေကောင်းဆိုသလိုပေါ့။ ကိုယ်ထမ်းရသောဝန်ကို ဘာလို့ကိုတစ်ဦးတည်းထမ်းမှာလဲ၊ ဗိမာန်တော်သို့ လာခြင်းဟာ သင်နဲ့သင်ရဲ့ မိတ်ဆွေများ မိတ်သဟာယပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာပြုမူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုနက်နက်နဲနဲပြောလိုတာကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များကို လမ်းညွန်ခြင်းစသဖြင့် မိတ်သဟာယပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်ယုံ ကြည်သူအချင်းချင်း ဘယ်လောက် ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တည်ဆောက်နိုင်သလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါ၊ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားပေးတိုက်တွန်းပါ။
ယေရှုက မသဲ ၁၈း၁၉ မှာ တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည် သဘောချင်းတူ၍ ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆု တို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသောငါ၏ ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သူများရဲ့ ဆုတောင်းပဌာနဟာ တန်ခိုးနဲ့ပြည့်ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းသို့ ပုံမှန်မလာပဲ တစ်ဦးတည်း ဆုတောင်းနေသူများအဖို့ကတော့ သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအများကဘယ်လိုမှမသိရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘုရားကျောင်းသို့ လာပြီး မိမိလိုအပ်ချက်များအတွက် အများနဲ့အတူဆု တောင်းခံဖို့လိုပါတယ်။
၈။ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်သူများကိုမေတ္တာထားတတ်ရန်၊ အားပေးတတ်ရန်
ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များရဲ့အဓိကကျင့်ဝတ်ကတော့ကိုယ်နဲ့စပ်ဆိုင်သူများကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန် ၁၃ မှာပြောထားပါတယ်။ လူအများစုဝေးရာ ဗိမာန်တော်သို့ သွားရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဟာလည်းတတိယပညာတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းဟာ ထိုနေ့ရက်ကို အောင်းမေ့လောဆိုတဲ့ အချက်ကိုဖောက်ပြက်ရာရောက်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးစုဝေးခြင်းမရှိပဲနဲ့တစ်ဦးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျန်တစ်ဦးက ဘယ်လိုသိနိုင်ပါမည်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗိမာန်တော်မှာ စုဝေး၀တ်ပြုခြင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ရင်တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ အတူရှိနေခြင်းဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တန်ခိုးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ အားပေးမှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထပ်မံသတိပေးလိုပါတယ်။
ကျမ်းစာတော်မြတ်အရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဟာအတူတကွဝတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖန်းဆင်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖန်ဆင်းခံ လူသားများဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာ အားလုံးဟာ ဘုရားပေးအပ်ထားတဲ့ ဆုကျေးဇူးများသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းကို အင်မတန်မှနှစ်သက်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူများအတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းဟာ ဘုရားသခင်က သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးအပ်ထားတဲ့ အပြစ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
သားတော်ယေရှုအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံစားရသလို ထာဝရအသက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသူများ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူအများနဲ့ အတူချီးမွမ်းခြင်း၊ ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဂုဏ်တော်ကျူးဧခြင်းများကို အင်မတန်မှနှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော ခမည်းတော်၊သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ကုိုိဖန်းဆင်းထားတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်တော်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကို မကိုးကွယ်မ၀တ်ပြုခဲ့ရင် သင့်အသက်တာမှာ တစ်ခြားသောအရာများဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများ၊ သင့်အလုပ်စသဖြင့် ထိုအရာများအပေါ်မှာ သင်ကိုးစားပြီး အသက်ရှင်သောသူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ဆိုတာ သတိပေးပါရစေ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြလိုတာကတော့ဗိမာန်တော်သို့သွားရောက်ဝတ်ပြုခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျယ်ပြန့်ဖို့ဆိုတာပါပဲ။ ယုံကြည်သူများရဲ့ အသင်းတော်မှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးတကာတို့အားငါ့တပည့်ဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့ မသဲ ၂၈း၁၉ မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ သတင်းကောင်းများဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်သူများအတွက် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ၀င်စားခွင့်ရခြင်း စသည်များကို ဟောပြောဖို့ လိုပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ လူအများ ၀င်စားခွင့်ရရှိစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းသို့ ပုံမှန်သွားရောက်ဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သတင်းကောင်းကို ဘယ်လိုကျယ်ပြန့်စေနိုင်ပါသလဲ။ နည်းပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ ပထမအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ဒေသန္တရ အသင်းတော်များ သင်အလှူငွေအားဖြင့် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သင့်နေထိုင်ရာနေရာမှာ ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကို ပိုမိုဟောပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူများရဲ့ အလှူငွေအားဖြင့် ပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာ ထိုနေရာတဲ့ သာသနာဟာမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်သို့ပုံမှန်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ပုံမှန်ပေးလှူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ အသင်းတော်မှာ ဟောကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကြားနာခြင်းအားဖြင့် သင်သည်လည်း ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုမိုနိုးကြားလာမှာဖြစ်ပြီး ထိုသတင်းကောင်းများ ကိုပြန်လည်ဝေငှနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ ဘုရားကျောင်းသို့ ပုံမှန်လာရောက် သူများအနေနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာလူသားများအတွက်ဘယ်လိုအဓိပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သင်ကပြန်လည်ဝေငှနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သင်ဗိမာန်တော်သုိ့ ပုံမှန်လာရောက်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်တိုင်းမှာ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို သင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့လည်း ခရစ်တော်ရဲ့ သတင်းကောင်းကိုကြားခွင့်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေ- သင့်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာ မကြာမီ တွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါမယ်။
မူရင်းဆောင်းပါး- Ten Good Reasons to GO to Church by Peter Mattice from The Christian Post
 Posted in ဆောင်းပါး	 Tagged Church, အသင်းတော်	0	Dec
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိတော်မူသော ဘုရား
(ဆာလံ၊ ၁ဝ၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့် ဂုဏ် ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူထားပါသည်။ ထိုစကားတော်သည ဘုရားသခင်၏စကားဖြစ်၍ သက်သေရှိပါသည်။ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်၍ ကတိတည်သောဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်တာ၌လက်တွေ့ ခံစားသိရှိထားသောသူများ ယနေ့လောကတွင် အမြောက်အမြားရှိနေကြပါသည်။ ထိုသက်သေကို မိတ်ဆွေ၏အသက်တာ၌ ခံစားရပြီးလား၊ မခံစားရသေးပါက ခံစားနိုင်ဖို့ရန် ယနေ့သခင်ယေရှုကဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ကရုဏာတော်ဟူသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးပြုမှုဖြစ်သည်။ မထိုကမတန်ဘဲနှင့် ခံစားရရှိသောအရာဖြစ်သည်။ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ကြောင့် ထိုက်တန်စွာခံစားရရှိသောအရာမှာ ကရုဏာတော်မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်က ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ ကရုဏာတော်အစဉ်တည်ကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ ထိုသက်သေကို ခံစားထားသော အခြားသူများက အတူတကွအာမင်ခေါ်၍ ဝန်ခံကြမည်သာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကရုဏာကျေးဇူးကို ခံစားရမှုအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။ အချို့က ကျန်းမာရေး၊ အချို့ကစိတ်ဒုက္ခပြဿနာ၊ အချို့ကစီးပွါးရေး၊ မိသားစုပြဿနာ စသဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီကြပါ။ သို့သော် တူညီသည့်ကဏ္ဍမှာ လူသားတိုင်းဝဋ်ကြွေးကံပိ၍ တမလွန်အရေးစိတ်မအေး ဖြစ်နေကြသည့် ပြဿနာဖိစီးမှုမှ ကယ်မတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကရုဏာတော်ကျေးဇူးပြုမူသည် လူသားတိုင်းတန်တူညီမ ခံစားနိုင်ရန် ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာနှင့် ပြင်ဆင်ပေးတော်မူ ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားရှင်သည် မိမိကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုသက်သေထူနိုင်ဖို့ရန် လူမျိုးတစ်မျိုးကို ရွေးချယ်တော်ခဲ့ပါသည်။ ထိုလူမျိုး တော်အားဖြင့် လူသားများသည် မိမိကောင်းမြတ်ကြောင်းသိမြင်ခံစားနိုင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူဘုရားရှင် သည် မိမိကောင်း မြတ်ကြောင်းကို အြားသူများခံစားနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိ၏စကားတော်ကိုနားထောင်စေခြင်းအားဖြင့် သက်သေထူနိုင်ဖို့ရန် အခွင့်အရေးပေးထားပါသည်။
ဘုရားရှင်သည် ဣသရေလလူများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှကယ်နုတ်၍ ခါနန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်ရာတွင် တောလမ်းခရီးမှခေါ် ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဣသရေလလူတို့သည် လမ်းခရီး၌ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့သောအခါ ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ သူတို့အားထို ဒုက္ခထဲမှ ဘုရားရှင်ကယ်နုတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအတူ လောက၌အသက်ရှင်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရာရာ၌ပြေလည်မှုရကြမည် မဟုတ်ပါ။ ရွှေငွေဥစ္စာရှိသော်လည်း ထိုအရာများက ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာအလုံးစုံကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါ။ လောကကြီးထဲတွင် လူ့အစွမ်းဖြင့်မဖြေရှင်းနိုင်သောပြဿနာများစွာရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြဿနာကြုံရခြင်းသည်လည်း ဘုရားရှင်ကမျက်နှာ လိုက်၍မဟုတ်ပါ။ ထိုပြဿနာများဖြင့် ဘုရားရှင်ကိုခေါ်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြဿနာများထဲမှ ဘုရားရှင်ကို အော်ဟစ်၍ ဘုရားရှင်ကပြန်ထူးပြီး အဖြေပေးသည့်သက်သေကိုရလျှင် ခရစ္စမတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် အတိတ်ကာလက အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ရုံသာမက ယနေ့လည်း အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားဖြစ် ပါသည်။
ယနေ့လောကတွင် သတင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ သတင်းတိုင်းသည်လူတိုင်းအတွကကောင်းသည်မဟုတ်ပါ။ “ငါ့ကိုယုံကြည် သောသူသည် အပြစ်စီရငခြင်းမခံရ”ဟူသောကတိတော်သည် ကျွန်ုပတို့အတွက် ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်သော ခရစ္စမတ်သတင်းကောင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသတင်းကောင်းသည် ဒုက္ခပြဿနာထဲမှ ဘုရားရှင်ကိုအော်ဟစ၍ ဘုရားရှင်၏ကယ်မမှုကိုခံစားရကာ ဘုရားရှင်သည်ကတိတော်နှင့်အညီ သစ္စာတည်ကြောင်းသိဖို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကျိုး အတွက် ဘုရားရှင်၏ပြင်ဆင်တော်မူချက်ဖြစ် သည။ ဆင်းရဲခြင်းရှိသမျှမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွှတ်ဖို့ရန် ဘိသိက်ခံယူ၍ ကြွလာတော်မူသော အရှင်သည် သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါ သည်။ မည်သည့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခထဲမှမဆို ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွှတ်ဖို့ရန် ကိုယ်တော်ရှင်သည် စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့ရသည့် ဒုက္ခပြဿနာထဲမှ ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းဖို့ရန်သာလိုအပ်ပါသည။ လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်း(၂ဝဝဝ)ခန့်က လောကသို့ကြွလာ၍ သက်သေအမျိုးမျိုးကိုထူပြီးသည့်နောက် ကွယ်ပျောက်သွားသောအရှင်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့တိုင်အသက်ရှင်၍ သက်သေထူဖို့ရန် စောင့်မျှော်နေသောအရှင်ဖြစ်ပါသည်။
ဧမာနွေလအရှင် အပျိုကညာဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓြေွယူ၍ လူ့လောက၌ဖွားသန့်စင်မှုကိုိခံယူတော်မူသောထိုအရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအသက်ရှင်လိုသောဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲပြဿနာများကို သိရှိသလို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားလိုအင်ဆန္ဒကိုလည်း သိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရှင်၏နာမကား ဧမာနွေလ တည်းဟူသော “ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိတော်မူသောဘုရား”ဟု အနက်ရပါသည်။ ဘုရားရှင်ကို မည်သူမျှလှည့်စား၍မရပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘုရားကမျက်နှာ လိုက်၍မဟုတ်ပါ။ နှလုံးသား၏ဆန္ဒနှင့် တုန့်ပြန်မှုကိုလိုက်၍ အဖြေပေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မိတ်ဆွေ၏၏၏၊ သင်သည် ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်သူမဖြစ်သေးသော်လည်း စိတ်အား မငယ်ပါနှင့်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်နိုင်ပါမည့်အကြောင်း သက်သေ ပေးပါဟု နှလုံးသားကဆန္ဒနှင့်တောင်းခံပါက ကိုယ်တော်သည်သင့်အား အမှန်ပင်သက်သေထူမစမည်ဖြစ်ပါသည်။
သက်သေခံပါ သခင်ခရစ်တော် လောက၌ ဖွားမြင်ခြင်းခံတော်မူသည့်အချိန်ကာလတွင် ကောင်းကင်တမန်သည် သိုးထိန်းများထံလာ ရောက်၍ သတင်းကောင်းကိုကြားပြောပါသည် (လု၊၂း၈)။ ထိုအခါ သိုးထိန်းတို့သည် ချက်ခြင်းတုန့်ပြန်ကာ သူငယ်တော်အား သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြပါသည်။ ထို့အတူ ယနေ့ခရစ္စမတ်၏ သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားရသည့်အခါ ဦးစွာမယုံကြည် ပါနှင့်။ ယုံကြည်နိုင်ဖို့ရန် သက်သေပေးပါမည့်အကြောင်း မြည်းစမ်း၍ခေါ်ကြည့်ပါ။ သက်သေရကိုရ လျှင်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ပါ။ သိုးထိန်းများသည် သတင်းကြားပြောကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့လည်း ကိုယ်တော်ရှင်၏ ကောင်းမြတ်ကြောင်းသတင်း ကြားရသည့်အတိုင်း မြည်းစမး၍သက်သေကိုရပြီးနောက် ကိုယ်တောအား ယုံကြည်လာသောအခါ ထိုသတင်းကောင်းကို အခြား သူများပါကြားသိခံစားနိုင်ရန် ထပ်ဆင့်ဝေငှသက်သေခံပါ။ ဤနည်းအား ဖြင့်အခြားသူများလညး ခရစ္စမတ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ခံစားနိုင်ရန် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ မေတ္တာဖြင့်သတိပေးဝေငှလိုက် ရပါသည်။
 Posted in ဒေသနာ	 Tagged ဒေသနာ	0	Dec
လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ခရစ္စမတ် အ ရှင်။
“…မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။ ( မဿဲ ၁း၂၁)”
ဤ ကျမ်း ပိုဒ် ကို ဖေါ် ပြ ရွတ် ဆို လိုက် သည် နှင့် ယုံ ကြည် သူ အား လုံး ၏ စိတ် တွင် အ လို လို မြင် ယောင် မျက် မှန်း တမ်း မိ နေ သည် မှာ ”ဤ အ ချိန် ကာ လ သည် ခရစ္စမတ်” အ ချိန် ကာ လ ရောက် သည် ဆို သည့် အ သိ ပင် ဖြစ် သည်။ ခရစ္စမတ် ကို ကမ္ဘာ နှင့် အ ၀ှမ်း က နှုတ် တွင် ရေ ပန်း စား နေ သည် မှာ မ ထူး ဆန်း လှ သော် လည်း အ သုံး ပြု ပုံ များ မှာ ကား ဆန်း ပြား နေ သည့် အ လျှောက် အ ကျိုး ရ လာဒ် များ က လည်း ကွဲ ပြား ခြား နား နေ လေ သည်။ Christmas Box, Christmas Tree, Christimas Celebration, နှင့် Christmas Carol , Christimas Discount, Holy day စ သည်၊ စ သည် ဖြင့် စီး ပွါး ရေး အ တွက် သော် ၎င်း၊ အ ပျော် အ ပါး အ တွက် သော် ၎င်း၊ ဘာ သာ ရေး၊ လူ မျိုး ရေး စ သော အ ကြောင်း ပြ ချက် များ စွာ ဖြင့် အ သုံး ပြု ပုံ ခြင်း မ တူ ညီ သည့် နည်း တူ ခ ရစ် တော် အား ယုံ ကြည် လက် ခံ ထား ကြ သော ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ကြား မှာ ပင် ခ ရစ္စ မတ် သည် ၀တ် ကောင်း စား လှ ၀တ် သည့် ပွဲ အ နေ ဖြင့် ရှု မြင် တတ် သူ များ က လည်း ရှိ သေး ပေ သည်။ လူ အ မျိုး မျိုး စိတ် အ ထွေ ထွေ ရှိ သည် ဆို သော် ငြား လည်း ခရစ္စမတ် ကို ထို ဓ လေ့ ထုံး တမ်း စဉ် လာ များ နှင့် အ တူ ဆင် နွဲ ရန် ကား လုံး ၀ သင့် လျှော် မှန် ကန် ခြင်း မ ရှိ ပါ လေ။ အ ကြောင်း မှာ ထို အ သုံး ပြု ပုံ သည်၊ မှန် ကန် သင့် မြတ် လျှော် ကန် ပါ က သ ခင် ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ထင် ရှား စေ နိုင် သ လို၊ အ ကယ် ၍ သင့် မြတ် လျှော် ကန၊် ဘု ရား ပေး ထား သော လမ်း စဉ် မ ဟုတ် ပါ က ရောက် လ တံ့ သော အ ကျိုး တ ရား တို့ သည် ကား သ ခင့် ဘုန်း လည်း မ ထွန်း လင်း၊ လော က သား တို့ အ တွက် လည်း အ ကျိုး မ ရှိ၊ အ ဆုံး တွင် ဘုန်း တော် ညှိုး နွမ်း စ ရာ ပင် ဖြစ် စေ သော ကြောင့် တည်း။ ၁။ ခရစ္စမတ် အဓိပ္ပါယ်။
ခ ရစ် တော် ဘု ရား ၏ လူ့ ဇာ တိ ခံ ယူ ခြင်း နှင့် တ ဖန် ကြွ တော် မူ လာ မည့် အ ချိန် ကာ လ ကို စောင့် မျှော် ရင်း က န ဦး ယုံ ကြည် သူ များ က မိ မိ တို့ ၏ စစ် မှန် ၍ မွန် မြတ် လှ သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား တော် အ တွက် ညှင်း ပန်း နှိုပ် စက် ခြင်း၊ သတ် ဖြတ် မှု များ အ ကြား မှာ တ ဦး နှင့် တ ဦး တိုး ၍ ခိုင် ခန့် စေ ရေး အ တွက် လေး ရာ စု တွင် စ တင် ခဲ့ ကြ ကြောင်း သ မိုင်း ဆ ရာ တို့ က မှတ် တမ်း တင် ခဲ့ ကြ လေ သည်။ ယ နေ့ ကျွန်ုပ် တို့ အ သုံး ပြု နေ ကြ သော ခရစ္စမတ် ကတ် ကို ဟင် န ရီ ကိုလ် က ၁၈၄၃ ခု နှစ် တွင် စ တင် တီ ထွင် ကာ ပုံ နှိပ် အ သုံး ပြု ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ လေ သည်။ အ ကယ် စင် စစ်၊ ခရစ္စမတ် အဓိပ္ပါယ် မှာ ”ဘု ရား နှင့် လူ ပေါင်း စည်း ခြင်း” ပင် ဖြစ် သည်၊ Christ+Mass= Christmas ဟူ ၍ ဖြစ် လာ ခြင်း ပင် ဖြစ် သည်။ ထို့ ကြောင့် နှုတ် က ပါတ် တော် သမ္မာ ကျမ်း စာ က “ယေ ရှု ခ ရစ် သည် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဟူ သော စ ကား သည် သစ္စာ စ ကား ဖြစ် ၏၊ အ ကြွင်း မဲ့ ခံ ယူ အပ် သော စ ကား လည်း ဖြစ် ၏” ဟူ ၍ ဆို ထား လေ သည်။ (၁ တိ ၁း၁၅) ထို့ ကြောင့် “လူ နှင့် ဘု ရား ပေါင်း စည်း ခြင်း” ကို ခရစ္စမတ် ဟူ ၍ ခေါ် ဆို သော ကြောင့်၊ ဧ ကန် စင် စစ် လော က တ ခု လုံး ၏ အ ကျွတ် တ ရား လမ်း အ တွက် ၀မ်း မြောက် ဖွယ် ရာ သီ တင်း ကောင်း တ ရား ကြား ပြော ရာ အ ချိန် ကာ လ ပင် ဖြစ် လေ သည်။ ထို့ အ တွက် ကြောင့် လည်း နိုင် ငံ တိုင်း လို လို တွင် ဘာ သာ ရေး ပွဲ လမ်း သ ဘင် များ ဖြင့် ကျင်း ပ ဆင် နွှဲ ခွင့် ပြု ထား လေ သည်။ သို့ ပါ လျက် ကျွန်ုပ် တို့ သည် ထို ရက် မြတ် မင်္ဂ လာ တွင် မည် သို့ မည် ပုံ ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို ကြို ဆို သည် ကို လွန် စွာ သ တိ ချပ် သင့် လှ ပေ သည်။ ထို့ ကြောင့် ခရစ္စမတ် အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ကို ကြို ဆို ကြ သော လူ ပုဂ္ဂိုလ် များ အ ကြောင်း နှင့် အ ကျိုး ရ လာဒ် များ ကို အ တူ တ ကွ ဆင် ခြင် လို ပါ သည်။
၂။ ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို စစ် မှန် စွာ ကြို ဆို ခြင်း။
သမ္မာ ကျမ်း စာ တော် မြတ် တွင် ခရစ္စမတ် အ ရှင်ကို စစ် မှန် စွာ ကြို ဆို သူ များ သည် မိ မိ တို့ ၏ အ သက် တာ တွင် “ဘု ရား နှင့် လူ ပေါင်း စည်း ခြင်း” ဆု ကျေး ဇူး ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ကို လက် တွေ့ ခံ စား ရ ၍ မင်္ဂလာ ရှိ သော ဘ ၀ ကို ပိုင် ဆိုင် ရ သည် သာ မ က၊ သူ တို့ မှီ တင်း နေ ထိုင် ရာ ရှိ လူ အ ပေါင်း အ တွက် လည်း မင်္ဂလာ အ ပေါင်း ကို ခ ညောင်း စေ သော သူ များ ဖြစ် ခဲ့ ကြ ရ လေ သည်။
က။ သိုး ထိန်း များ (လုကာ ၂း၈-၂၀)။
သိုး ထိန်း များ သည် ကောင်း ကင် တ မန် များ ထံ မှ လော က သား အား လုံး တို့ အ တွက် “၀မ်း မြောက် ဘွယ် ရာ သီ တင်း စ ကား” ကို ကြား ရ ကြ ပြီး နောက်၊ သွား ရောက် ဖူး မျှော် သည် တွင် လော က ၏ ကယ် ချွတ် အ ရှင် ခ ရစ် တော် ဘု ရား အား ဒိ ဌ ကိုယ် တွေ့ ဖူး မျှော် ကြ ရ ပြီး မိ မိ တို့ အ သက် တာ တွင် မွန်မြတ် လှ သော ဘု ရား ရ တ နာ ကို ပိုင် ဆိုင် ရ သည် သာ မ က၊ အ ခြား တ ပါး သော သူ များ အား လည်း ထို မင်္ဂလာ သီ တင်း တ ရား နှင့် သီ တင်း ကောင်း အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ဘု ရား မြတ် အ ကြောင်း ကို ကြား ပြော ခွင့် ရ ခဲ့ ကြ လေ သည်။ လူ သည် ဆင်း ရဲ ချမ်း သာ၊ အ လွှာ ခွဲ ခြား တတ် ကြ သော် လည်း ရ ခဲ လှ သော လူ့ ဘ ၀ တွင် မြတ် ဘု ရား က အ ဆင့်၊ အ လွှာ ခွဲ ခြား တော် မ မူ ပဲ “လူ တိုင်း ဘု ရား နှင့် ပေါင်း စည်း ခြင်း” ဆို သော အ ခွင့် ထူး ကို ခံ စား နိုင် ကြောင်း ထို အ ကျွတ် တ ရား လမ်း အ ရှင် ကို ကိုယ် တွေ့ ခံ စား ကြ ရ သော သိုး ထိန်း တို့ က စစ် မှန် သော ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို စစ် မှန် စွာ ကြို ဆို ခြင်း ဖြင့် မင်္ဂလာ ရှိ သော သူ များ အ ဖြစ် သက် သေ ပြ ခဲ့ ကြ လေ သည်။
ခ။ ပ ညာ ရှိ များ (မဿဲ ၂း၁-၁၂)။
တ ဘောင် စ ကား တို့ နှင့် အ ညီ အ ကျွတ် တ ရား လမ်း ၏ အ ရှင် ပေါ် ထွန်း လာ မည့် အ ကြောင်း ကို သိ ရှိ သည့် အ တိုင်း မျှော် လင့် စောင့် စား နေ ကြ သော ပ ညာ ရှိ တို့ သည် စစ် မှန် သော ကယ် ချွတ် ရှင် ကြွ လာ သည့် အ ချိန် ကာ လ ကို ဖေါ် ပြ သည့် ကြယ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ တွင်၊ မိ မိ တို့ ၏ အ သက် အ ရွယ်၊ အိုး အိမ် စည်း စိမ်၊ ခ ရီး အ ကွာ အ ဝေး ကို ပင် ငဲ့ ကွက် ခြင်း မ ရှိ ကြ ပဲ ကယ် ချွတ် အ ရှင် အား ဖူး မျှော် ရန် အ ရာ ရာ ကို စွန့် ကာ “လူ နှင့် ဘု ရား ပေါင်း စည်း ရေး” အ တွက် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ဘု ရား ကို ဖူး မျှော် ရန် ခ ရီး ထွက် ခွါ လာ ကြ သည့် အ တိုင်း၊ လူ တိုင်း နှင့် ဝေး တော် မ မူ သော အ ရှင် ကို မယ် တော် နှင့် တ ကွ တွေ့ ၍ “ဦး တိုက် ဖူး မျှော် ရ ခြင်း” အ ခွင့် ထူး ကို ရ သွား ကြ ကာ မိ မိ တို့ ၏ ဓ လေ့ အ ကျင့် ဟောင်း လမ်း စဉ် တို့ တွင် ထပ် မံ ကျဉ် လည် ခြင်း မ ပြု ရန် ဘု ရား ရှင် အ ထံ တော် မှ နှုတ် တော် ထွက် စ ကား ကို ရ တော် မူ သည့် အတိုင်း ၀မ်း မြောက် ၀မ်း သာ စွာ ဖြင့် “လူ နှင့် ဘု ရား ပေါင်း စည်း ခြင်း” တည်း ဟူ သော ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ဘ ၀ အ သက် တာ သစ် ဖြင့် ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို စစ် မှန် စွာ ကြို ဆို ခြင်း ဖြင့် ခရစ္စမတ် အဓိပ္ပါယ် စစ် ကို ဖေါ် ထုတ် ပြ သ ခဲ့ လေ သည် မှာ ယ နေ့ ကျွန်ုပ် တို့ အ တွက် စံ ပြု စ ရာ ပင် ဖြစ် လေ သည်။
၃။ ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို မှား ယွင်း သော ကြို ဆို ခြင်း (မဿဲ ၂း၁-၁၈)။
ဘု ရား နှင့် လူ သည် ခွဲ ခြား နေ ၍ မ သင့် လျော် ပါ ပေ။ အ ကယ် ၍ သီး ခြား ဖြစ် တည် နေ ပါ က ထို သူ သည် အိပ်၊ စား၊ မေ ထုန်၊ ကာ မ ဂုဏ် တည်း ဟူ သော အ ဆင့် တွင် သာ ရှိ သည့် တိရိစ္ဆာန် နှင့် မ ခြား နား အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပေ လိမ့် မည်။ ပု ခုံး နှစ် ဖက် ကြား မှ ခေါင်း ပေါက် သော် လည်း လူ စင် စစ် ကား မ မြည် ဟူ ၍ လူ ကြီး သူ မ တို့ ထံ မှ စာ ရေး သူ ကြား နာ ခံ ယူ ခဲ့ ဘူး ပါ သည်။ ထို နည်း တူ၊ နှုတ် က ပတ် တော် မြတ် က လည်း “မြည်း၊ နွား” တို့ သည် သူ တို့ အ ရှင် နှင့် စား သော နေ ရာ ကို သိ သော် လည်း ငါ ၏ လူ တို့ မူ ကား ထို တိရိစ္ဆာန် များ လောက် ပင် မ သိ တတ် ဟူ ၍ (ဟေရှာ ၁း၃) တွင် ဆို ထား လေ သည်။ ထိုသို့ သော သူ တို့ ၏ အ သက် တာ တွင် ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို မှား ယွင်း စွာ မည် သို့ ကြို ဆို ၍၊ မည် သို့ အ ကျိုး မျိုး ကို ပေး ခဲ့ သည် ကို ကား ….
က။ စိတ် ပူ ပန် ခြင်း။
“လူ နှင့် ဘု ရား ပေါင်း စည်း ရေး” အ တွက် အ ဘယ့် ကြောင့် စိုး ရိမ် ပူ ပန် ရ ပါ သ နည်း။ ခရစ္စမတ် အ ချိန် တွင် လူ့ ဇာ တိ ခံ ယူ လာ သော ခရစ္စမတ် အ ရှင် သည် လူ သား တို့ အ တွက် “၀မ်း မြောက် ဖွယ် ရာ အ ကျွတ် တ ရား သီ တင်း” ကို ယူ ဆောင် လာ သည် ဖြစ် လျှက် ဟေ ရုဒ် ဘု ရင် အ တွက် မူ ကား ၀မ်း မြောက် စ ရာ မ ဖြစ် ခဲ့ ပါ၊ အ ကြောင်း မှာ ထို “မြတ် ဘု ရား ရှေ့ တွင် ဦး ညွတ် ၀င် ရ မည့် အ ရေး” ကို ဟေ ရုဒ် အ တွက် မ ဟာ့ မ ဟာ ဒုက္ခ ကြီး ဖြစ်နေ သော ကြောင် တည်း။ “ဤ ဇမ္ဗူ တွင် ငါ့ လို လူ မ ရှိ” ဟူ သော စိတ် ကြီး ၀င် ရော ဂါ ဆိုး ကြောင့် ပင် ဖြစ် ပေ သည်။
ခ။ ပြင်း စွာ အ မျက် ထွက် ခြင်း။
“အ မှန် တ ရား ဟူ သည် ဖုံး ကွယ် ၍ မ ရ” ဆို သည် ကို ဟေ ရုဒ် သည် သိ သော် လည်း မိ မိ ၏ အ ဖြစ် မှန် ကို ဖုံး ဖိ လို သော ကြောင့် လုံလပြု အား ထုတ် သော် လည်း မ ရ သည့် အ ဆုံး ပြင်း စွာ အ မျက် ထွက် ရ လေ တော့ သည်။ ထို့ ကြောင့် လည်း ရ ခဲ လှ သော လူ့ ဘ ၀ ကို “ဘု ရား ဖက် တော့ အ သက် ရှည်” ဆိုသော စ ကား ကိုသိ ပင် သိ ငြား သော် လည်း ဒေါ သ ရှေ့  ထား ၍ ဘု ရား မ ဖက် ပဲ အ မှား တွေ ထပ် ဆင့် ကာ ဘ ၀ တွင် အ မှား ကြီး မှား ခဲ့ သူ ထဲ တွင် ဟေ ရုဒ် သည် တ ဦး အ ပါ အ ၀င် ဖြစ် ခဲ့ ရ လေ တော့ သည်။
ဂ။ အ သက် ကို သတ် ခြင်း။
“ဘု ရား မ ဖက် သ ဖြင့် အ မှား တွေ ဆင့် နေ သော” ဟေ ရုဒ် သည် နောက် ဆုံး အ ဆင့် တွင်၊ ခရစ္စမတ် အ ရှင် အား ကောင်း စွာ ကြို ဆို ရ မည့် အ စား၊ ခရစ္စမတ် အ ရှင် မွေး သည့် နေ့ ကို ပင် တွက် ချက် ၍ နှစ် နှစ် နှင့် နှစ် နှစ် အောက် ယုတ် သော က လေး သူ ငယ် များ ကို သတ် ဖြတ် ရန် မိ မိ ၏ စည်း စိမ်၊ အ ခွင့် အာ ဏာ၊ အ ရာ ရာ တို့ ကို ဘ ၀ တွင် ဘု ရား အ တွက်၊ အ များ အ တွက် ကြိုး စား မည် ဆို သော အ တွေး အ ခေါ် များ မှ လွဲ ဖယ် ကာ မ ကောင်း သော အ သက် သတ် ခြင်း တို့ ကို ကြိုး စား အား ထုတ် ခဲ့ လေ တော့ သည်။ ဤ ကား “သတ် သော သူ မည် သည် ကား ဘု ရား ၀တ် ကို ငါ ပြု ပြီ ဟု မိ မိ ထင် မှတ် သော အ ချိန် ကာ လ ရောက် လိမ့် မည်” (ယော ၁၆း၂)။ ဆို သည့် အ တိုင်း အ ကျွတ် တ ရား တို့ ၏ အ ရှင်၊ ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို မျှော် ကိုး စောင့် စား နေ သည့် ဘာ သာ ရေး ၌ ကျင် လည် နေ သည့် လူ သား တ ဦး ပင် ဖြစ် သော် ငြား လည်း အတ္တ တ ရား တို့ ၏ ကြီး စိုး ခြင်း လောင်း ရိပ် အောက် တွင် လူ ဖြစ် ကျိုး နပ် စေ မည့် “ခရစ္စမတ် အ ရှင်” ကို မှား ယွင်း စွာ ကြို ဆို ခဲ့ လေ သည်။ အ ကျိုး ဆက် ကား သူ ၏ ဘ ၀ သ မိုင်း တ လျှောက် လုံး တွင် လူ ဖြစ် ကျိုး မ နပ် ခဲ့ ရ သည့် နည်း တူ။ “အ သက် ပျို စဉ် ကာ လ တွင် စိတ် ရွှင်လန်း ခြင်း ရှိ လော့….သို့ ရာ တွင် ထို အ မှု အ လုံး စုံ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် စစ် ကြော ၍ သင့် ကို အ ပြစ် ပေး တော် မူ မည် ဟု အောက် မေ့ လော့” (ဒေသနာ ၁၁း၉) ဆို သော လူ မျိုး တ ကာ တို့ ၏ အ ရှင် ၏ သ တိ ပေး စ ကား ကို လျစ် လျူ ရှု ပြီင်္း ရင် ဆိုင် ဖြတ် သန်း ခဲ့ ရာ ဘ ၀ အ ရေး တွင် မ လှ မ ပ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် အနိစ္စ ရောက် ခဲ့ ရ လေ တော့ သည်။ နိ ဂုံး “ဘု ရား နှင့် လူ ပေါင်း စည်း စေ သော ခရစ္စမတ်” အ ချိန် ကာ လ တွင် အ ချို့ က အ လေး အ မြတ် ထား ကာ ထို ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို ကြို ဆို ခဲ့ သော ကြောင့် သူ တ ပါး တို့ အား လည်း ထပ် တူ ခံ စား စေ ၍ အ ကျွတ် တ ရား လမ်း အ ရှင် ခ ရစ် တော် ဘု ရား ထံ အ ရောက် ပို့ ဆောင် ပေး ခဲ့ ကြ လေ သည်။ အ ချို့ တို့ မူ ကား မိ မိ ကိုယ် ၌ က ခရစ္စမတ် အ ရှင် ကို လက် ခံ ကြို ဆို လို ခြင်း မ ရှိ သည့် ပြင် သူ တ ပါး အား လည်း လက် ခံ ကြို ဆို ခြင်း မ ပြု ရန် တား ဆီး ခြင်း အ မှု ကို ပြု ကြ လေ သည်။ Annodomini = ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ဟူ သော သ မိုင်း ၀င် A.D ၂၀၀၉ ဒီဇင်္ဘာ ခရစ္စမတ် အ ချိန် အ ခါ သ မ ယ ၌ “အ လို တော် သို့ လိုက် ခြင်း သည် ယဇ် မျိုး ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏” (၁ ရာ ၁၅း၂၂) ဆို သော စ ကား အ တိုင်း “ဘု ရား နှင့် လူ အ မှန် ပေါင်း စည်း ခြင်း” တည်း ဟူ သော ခရစ္စမတ် အချိန်အခါတွင် ခရစ္စမတ် အ ရှင်အား စိတ် နှ လုံး မာန် လျှော့ ချ ကာ ဦး တိုက် ကြည် ညို ဖူး မျှော် လျက် မိ မိ တို့ ၏ ဘ ၀ ကို ဆင် ခြင် အောက် မေ့ ရင်း စစ် မှန် သော ကြို ဆို ခြင်း ဖြင့် လော က ၏ အ လင်း အ ဖြစ် အ သက် ရှင် ကြ ပါ စို့ ဟု ဆန္ဒ ပြု လျှက်-
နာ မ တော် မြတ် ၌
Samuel Soe Lwin
ခရစ္စမတ်ဆိုတာ ခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်ကိုသတိရအောက်မေ့ပြီး ခရစ္စမတ်ပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် အိမ်မှာ ကြက်ကလေးမွေးတော့ ကြက်ကလေးက ဆော့ရင်းနဲ့ အိမ်သာတွင်းထဲကျသွားတယ်။ အိမ်သာကျင်းထဲမှာ ကြက်ကလေးက ပိကျိပိကျိနဲ့ ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက်နဲ့ ကျနော် တုတ်နဲ့ကော်လည်း ကြက်ကလေးကတော့ ဟိုပြေးဒီပြေးပါဘဲ။ ကြက်ကလေးတော့ တွင်းထဲမှာ ဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်တော့ သေတော့မယ် ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းပေါ့ နောက်ဆုံးတော့ကျနော်လည်း ပုဆိုးကို သေခြာပြင်ဝတ် ခတောင်းကျိုက်ပြီးတော့ အိမ်သာကျင်းထဲ ဆင်းပြီး ကြက်ကလေးကို တွင်းပေါ်ပြန်တင်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ တော်တော်လေး ညစ်ပတ်သွားတယ် ချီးပေသွားတယ်။ သန့်ရှင်းရေးကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ရတယ်။း)
ဒီလိုပါဘဲ လူသားအပြစ်သားတိုင်းကို ကယ်တင်ဖို့ ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်း ဘုရားဇာတိကနေ လူဇာတိကိုခံယူပြီး နှိမ့်ကျလှတဲ့ နွားတင်းကုတ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး ခရစ္စမတ်ဆိုတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ မွေးနေ့ပွဲဆိုတာရှိပါတယ်။ ကျနော် အဖေနဲ့အမေ၊ အဖိုးနဲ့အဖွား၊ ဘေး ဘီ ဘင် ဘောင် စသဖြင့် မွေးနေ့တွေရှိကြပါတယ်။ ကျနော်မှာ အဖိုးအဖွားတို့ခုချိန်မှာ အသက်မရှိတော့ပါဘူး။ အသက်မရှိတော့တဲ့ သူတို့အတွက် မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးချင်ပေမဲ့ လုပ်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အသက်မရှိကြတော့လို့ မွေးနေ့ပွဲ ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ရဲ့ အသက်ရှိနေသရွှေ့ကာလပတ်လုံး မွေးနေ့ကိုတော့ လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။
ဒီအတိုင်းပါဘဲ ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်း အစဉ်အမြဲ ကျနော်တို့နဲ့ရှိနေလို့ ခရစ္စမတ်ဆိုတဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုလုပ်သွားရခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
(သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကို အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည့်သူဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။ မဿဲ ၁း၂၁)
မူရင်း။ ။ http://lashioregion.multiply.com/reviews/item/6
 Posted in အထွေထွေ	 Tagged အထွေအထွေ	0	Dec
ဒီဇင်ဘာမှာနွဲလို့ပျော် ခရစ်ဘုရားရဲ့ မွေးနေ့တော်
တို့ဘုရားရှင် သခင် ကတော့
 Posted in ကဗျာ	 Tagged ကဗျာ	0	Dec
ကောင်းကင်မှာ ကြယ် လင်းရောင်ခြည်
တိတ်တဆိတ် လွမ်းရင်း အဲဒီသီချင်းလေးကို ညည်းနေမိတယ်။
သူငယ်တော်က ကောက်ရိုးတွေကြားမှာ၊ နွားစားခွက်ထဲမှာ၊ နွေးထွေးမှု သိပ်မရှိပါဘဲ အိပ်စက်လို့ …။ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တစင်းလင်းလက် … ပညာရှိတွေက အဲဒီကြယ်ကတဆင့် မင်းလောင်းကိုရှာ .. ဒဏ္ဍာရီပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ပဲ ဆိုဆို … သူကြွလာခြင်းက လူသားတွေအတွက်တဲ့ .. နွားစားခွက်ထဲက ခရစ္စမတ်မှသည် ဟိုတယ်ပေါ်က ခရစ္စမတ်ထိ အဓိပ္ပာယ်က ဒါပါပဲ …။ ကျမကတော့ ကျမ ရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ကို ရွတ်နေမိတယ် …။
ဘယ်သူတွေကို မစကြမယ် စာရင်းလုပ်ထားလိုက်ဦး
ညီညီညာညာ တေးဖွဲ့ကြဖို့ သီချင်းသစ်တို့ရှာဦး
မွေးဖွားတော့မယ့် ခရစ်တော်ရှင်အတွက် သီချင်းသစ်များနဲ့တို့ကြိုဆိုစို့
အတွေးဆိုးများ ဖယ်ထားလိုက်ကြဟေ့ ..
ဟိုမှာ ဟိုမှာ ချမ်းလွန်းလို့တဲ့ နွေးထွေးမှုများဝေဦး
ကယ်တင်ရှင် ကြွလာတော့မယ် ဒီသတင်းကောင်း တို့ဝေမျှမယ်
နှင်းများဖွေးဖွေးကျနေပါစေ ချမ်းအေးလွန်းလို့တုန်းခိုက်နေပါစေ လက်ခုပ်တီးလို့တို့တတွေသွားစို့
ကယ်တင်ရှင် ကြွလာတော့မယ် ……. ။ ။
(သီချင်းသံစဉ်ကိုတော့ ကြုံကြိုက်ရင် တင်ပေးပါ့မယ်)
 Posted in အက်ဆေး	 Tagged အက်ဆေး	0	Sep
ဆရာကြီး Rick Warren နှင့် အင်တာဗျူး
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရသော post တစ်ခုမှာ အလွန်ပဲ စိတ်နှလုံးကို တို့ထိသောကြောင့် မိတ်ဆွေများအား ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာကြီး Rick Warren ကို အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယာပြည်နယ် Saddleback မြို့ရှိ အသင်းတော်ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သလို၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များမှာ အလွန်ပဲ ရောင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့ Purpose of Driven Life (40 Days) စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုတဲ့ ဆရာကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Paul Bradshaw ဆိုသူမှအင်တာဗျူးလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားစေလိုသောစေတနာစိတ်ဖြင့်ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတွေက ကျွန်တော့်ကို မေးကြပါတယ်။ ဘ၀မှာအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတဲ့။ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်- လူရဲ့ဘ၀ဆိုတာ ထာဝရကာလအတွက် အသက်ရှင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလောကထဲမှာ အစဉ်အမြဲကြာရှည်စွာ အသက်ရှင်ဖို့ ဘုရားရှင်က ဖန်ဆင်းထားခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်က သူနဲ့အတူ ယုံကြည်သူများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ အတူနေထိုင်စေချင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ အသက်ရှုခြင်းဟာလည်း ရပ်တန့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင် အသက်ဆုံးရှုံးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္စာကိုယ်အားဖြင့် ယခုဘ၀မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်သွားသော်လည်း၊ အဆုံးဆိုတာမဖြစ်သေးပါဘူး။ လူလောကမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသက်(၆၀)(၈၀)သည်ဖြင့် နေကြရမှာဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ မဆုံးသောထာဝရနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း သန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာထိ အသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက် လူ့လောကမှာ အသက်ရှင်စဉ်အချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို လေ့ကျင့်သင်ယူခြင်းအားဖြင့် ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာ ဘယ်လို
နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကို ဘုရားရှင်က သွန်သင်ထားပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားရှင်အားဖြင့် ပုံသွင်းခြင်းခံရသူများ ဖြစ်သလို၊ ဘုရားရှင်အတွက်လည်း အသက်ရှင်ကြရသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို မိတ်ဆွေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင် ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ပြသနာများစွာနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ယခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာကျော်လွှားသွားပြီ
ဆိုရင် နောက်ထပ်ပြသနာတစ်ခုက မိတ်ဆွေဆီကို လာဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။
- ဘုရားရှင်က သင့်ဘာလဲဆိုတာထက် သင်ရဲ့အကျင့်စရိုက်က ဘာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဘုရားရှင်က သင့်ကို ပျော်ရွှင်မှုပေးခြင်းထက် သင့်ကို သန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်တာကို ပိုပြီးပြုလုပ်ပေးလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကထဲမှာ နေထိုင်အသက်ရှင်စဉ်အခါမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းက ဘ၀ရဲ့ပန်းတိုင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ရဲ့ အဓိကပန်းတိုင်ဟာ ဘုရားရှင်က သင့်ကို ခရစ်တော်နည်းတူ အသက်ရှင်စေလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များတွေက ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ အချိန်များဖြစ်သလို၊ အင်မတန်မှ ခက်ခဲတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီး Kay ကကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာတောင်ကုန်း၊ တောင်ကြားတွေမှာ ဖြတ်လျောက်ရသလို မှောင်မိုက်တဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိပြီး တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်ပြီး အလင်းထဲမှာ အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဆိုးရှိသလို အကောင်းလည်းရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းပဲ အကောင်းမရှိသလို၊ အဆိုးဆိုတာလည်း အမြဲတမ်းမရှိပါဘူး။ သင်ရဲ့ဘ၀မှာ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သင်ဦးတည်ချက်ထားတတ်သလို သင့်ရဲ့ပြသနာကိုလည်း သင်ဦးတည်ချက် ထားတတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ခက်ခဲမှုပြသနာကို သင်ဦးတည်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ မိမိကိုယ်ကို ဦးစားပေးတဲ့သူ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ရှိ သရွေ့ ငါရဲ့အကြောင်း၊ ငါရဲ့ပြသနာ၊ ငါရဲ့အခက်အခဲ နာကျင်မှု ဆိုတာပဲ စိတ်က ရောက်နေမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုမှ လွတ်မြောက်ဖို့ရာ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ အထိုအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ့်အချက်ကတော့ ဘုရားရှင်ကို ဦးစားပေးပြီး ဘုရားရှင်နှင့်နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးသည်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော မိတ်ဆွေများမှ ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးကြသော်လည်း သူ့ရဲ့ကင်ဆာရောဂါဟာ ပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်က သူမအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပိုပြီး ကြံ့ခိုင်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာ ပါဝင်ပြီး လူတွေကို စောင့်ရှောက်ကူညီခြင်းအားဖြင့် ဘုရားဘုန်းကို ထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။
တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို ခံစားနားလည်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင် ကျွန်တော်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်က စာအုပ်ရေ (၁၅) သန်းကျော် ရောင်းချလိုက်ရတဲ့အတွက် တမဟုတ်ချင်း သန်းကြွယ်သူဌေးအဖြစ်ကို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ မကောင်းတဲ့သတင်းအားဖြင့်လည်း အရင်က ကျွန်တော့်ရဲ့အသက်တာမှာ တစ်ခါမှမခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ ဖော်ပြခြင်း ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဘုရားရှင်ကတော့ ငွေကြေးချမ်းသာခြင်းအားဖြင့် သင့်ဘ၀ကိုလွယ်ကူစေဖို့ ပေးမှာဖြစ်သော်လည်း တပြိုင်ထဲမှာပဲ
စိတ်ပျက်စရာတွေကို မိတ်ဆွေရဲ့ အတ္တအတွက်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘုရားရှင်ကို မေးပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘုရားရှင် ကျွန်တော်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ- ဘုရားက ကျွန်တော့်ကို ကျမ်းစာအားဖြင့် သွန်သင်ပါတယ်။ ၂ကော ၉ နဲ့ ဆာလံ ၇၂ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအချက်- ငွေအများကြီးရသော်လည်း မိမိရဲ့ဘ၀နေထိုင်တဲ့ပုံစံကို မပြောင်းလဲစေပါဘူး၊ ကျွန်တော့်တို့အတွက် ဘာမှ တန်ဖိုးကြီးမားသော ၀ယ်ယူခြင်းများ မပြုခဲ့ပါဘူး။
ဒုတိယအချက်- မနှစ်က နှစ်လည်လောက်ကစပြီး ကျွန်တော့်အသင်းတော်က လစာမယူတော့ပါဘူး
တတိယအချက်- ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (Peace Plan) ဆိုတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ပြီး ဘုရားကျောင်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ခြင်း၊ နာမကျန်းသူများစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲသူများ ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ နောင်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သင်တန်းများပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
စတုတ္တအချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အသင်းတော်က လွန်ခဲ့တဲ့(၂၄)နှစ်ကျော်ကတည်းက ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ လစာငွေအားလုံးကို ကျွန်တော်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာဖြင့် အခုအချိန်မှာ ဘုရားအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ ပြန်မေးရပါမယ်။ မိမိအသက်ရှင်တာ
ကျွန်တော် မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာ အိပ်ယာဘေးမှာထိုင်ပြီး ဘုရားကိုပြောပါတယ်။ ဘုရားကို ပိုပြီးသိကျွမ်းချင်ပါတယ်။ ဘုရားကိုပိုပြီး ချစ်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို ဒီလောကထဲထားတာဟာ မိမိလုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ဖို့ ထားတာမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ဘုရားရှင်က သင်ဘာလုပ်တာလဲ ဆိုတာထက် သင်ဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တုိ့ဟာ အသက်ရှိသောလူသားများဖြစ်ပြီး၊ အသက်ရှင်ဖို့ရာ လုပ်ဆောင်သောသူများ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
- ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ ( Praise God)
- ခက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကို ရှာပါ။ (Seek God)
- တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားကို ၀တ်ပြုပါ။ (Worship God)
- နာကျင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ (Trust God)
- အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ (Thank God)
သင်ယခု သတင်းကောင်းကို သင်နဲ့နီးစပ်သူမိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ဝေငှပါ။ ဘုရားရှင်ထံမှကောင်းချီးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာကို ဖတ်ရှုသူမိတ်ဆွေများအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးရှိပါစေ။ ဒီစာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ခံစားရတာများ ရှိလျှင်လည်း ကျွန်တော့်အီးမေးလ်ထံ ပို့ပြီး ဝေငှနိုင်ပါတယ်။
 Posted in ဆောင်းပါး	0	Sep
* ယုံကြည်သူတို့ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချ
** ငိုကြွေးပါ၏၊ အဖ-ကယ်တင်ရန်
* စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချ၊ ပြပ်ဝပ်လျက်ဆုတောင်း
နှိမ့်ချလျက် ဆုတောင်းလျှင် မျက်နှာတော်ကိုရှာ
ရွေးနှုတ်ပါ ဤမြေကို ချမ်းသာပေးပါ။
( ပြစ်လွှတ်၍ ချမ်းသာပေးတော်မူပါ)
ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကို ရှာလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျှင် ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍ သူတို့ကိုချမ်းသာပေးမည်။ (၆ရာ ၇း၁၄) By thangno
 Posted in ဓမ္မသီချင်း	0	Sep
[mp3player width=220 height=20 config=songone.xml file=http://dl.dropbox.com/u/25839764/002%20Wi%20Nyin%20Taw%20Pot%20Saung%20Par.mp3]
၁။ ဝိညာဉ်တော်အရှင်သခင် ပို့ဆာင်တော်မူပါ
ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားများလိုလေသည် . . .
CHOး ဝိညာဉ်တန်ခိုးသွန်းလောင်း ခွန်အားပေးမူပါ၊
 Posted in ဓမ္မသီချင်း	0	Jul
how to embedded facebook video clip in wordpress
facebook က video clip တွေ wordpress မှာဘယ်လို embedded လုပ်မလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် facebook ပေါ်က video ကို embedd လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ facebook ဟာ youtube လို video sharing ဆိုဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ social networking site တစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့ facebook ပေါ်မှာ embedded လုပ်မလဲဆိုရင် ၊ video streaming ကို ကိုယ် ဆိုဒ်ပေါ်ကနေတင်လည်းရသား လို့ ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ရတာတော့ရပါတယ်။ သို့သော် video streaming ဟာ bandwidth အရမ်းစားပါတယ်။ shared hosting နဲ့မျိုးဆိုရင် ဘယ်လိုမှမနိုင်ပါဘူး။ အကယ်လို့ သင်က 10MB ရှိတဲ့ video clip တစ်ခုကိုပဲ လူအယောက်တစ်ရာကြည့်ရင် 1GB ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ video sharing site ကနေ embedded လုပ်ရင်တော့ bandwidth ကကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် video sharing ဆိုဒ်ကိုတော်တော်အသုံးများလာကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တွေ့သလောက် youtube ရယ် vimeo ဟာတော်တော်အသုံးများလာပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကံဆိုးစွာဖြင့်ပဲ youtube ကဘန်းထားသလို vimeo ကလည်းအရမ်းနှေးပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုလို့ရတာကတော့ facebook က video clip တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အားသာချက်တစ်ခုကလည်း facebook ဟာ အသုံးများတဲ့ social network တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်video နဲ့ပတ်သတ်ပြီး feedback တွေ comment တွေကိုလည်းအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အားနည်းချက်တခုကတော့ အရမ်းဆိုဒ်ကြီးတဲ့ video တွေကိုကြတော့ လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတာမို့လို့ vimeo ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပုံမှန် video clip တွေတင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုရင် အောက် snippet ကိုကူးပြီး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့နေရာထည့်ပါ။
<object width=”400″ height=”224″ >
<param name=”allowfullscreen” value=”true” />
<param name=”allowscriptaccess” value=”always” />
<param name=”movie” value=”http://www.facebook.com/v/xxx” />
<embed src=”http://www.facebook.com/v/xxx” type=”application/x-shockwave-flash”
allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”400″ height=”224″>
xxx နေရာမှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ video id ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ video id ဆိုတာက facebook ပေါ်မှာ video clip တစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ clip နှိပ်လို့ အဲဒီ video clip ရဲ့ page မှာပေါ်တဲ့ url ထဲက ဂဏန်းတွေပါ။ ဥပမာ 1215542 ဆိုပါစို့
အဲဒီnumber ကိုဖြည့်ပေးပြီး publish လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ တခုရှိတာ html mode နဲ့လုပ်မှသာအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 Posted in နည်းပညာ	 Tagged facebook, နည်းပညာ	0	Post navigation
Recent Posts	ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်သွားဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ
Categories	ကဗျာ (13)
Recent CommentsSueshalinlatt on တွေး မိ သည့်ပုစ္ဆာGUEST on လရိပ်မခြွေမီစောစောကြွေပေါ့နှင်း – ၃ဗိုလ်ကြက် on ကျွန်တော်နှင့် အိုင်တီMeta	Log in
| Theme: iTheme2 by Themify.